प्रसुति गृहमा एक महिलाले ५ शिशुलाई जन्म दिइन् – Nepalkakura
प्रसुति गृहमा एक महिलाले ५ शिशुलाई जन्म दिइन्
काठमाडौं—थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुति गृहमा एक महिलाले ५ शिशुलाई जन्म दिएकी छन् । सोमबार नुवाकोटकी २८ वर्षीया सोमिका तामाङले ५ वटा शिशुलाई जन्म दिएकी हुन् ।
५ मध्ये चार जना जीवित रहेको र १ जना भने जन्मनुअघि नै मृत्यु भइसकेको थियो । अस्पतालका स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. कृतिपाल सुवेदीको नेतृत्वमा शल्यक्रियामार्फत सोमबार बिहान मृतसहित ५ शिशुको जन्म भएको हो ।
शल्यक्रियामा डा. सुवेदीलाई डा. दिप्ती श्रेष्ठ, डा.नमिता सिङदेनले साथ दिएका थिए भने एनेस्थेसियामा डा. मुकेश कुमारले नेतृत्व गरेका थिए । त्यस्तै, नर्सिङ टिमको नेतृत्व रविना प्रजापतीले गरेकी थिइन् भने बाल रोग विशेषज्ञ डा. श्रद्धा श्रेष्ठले बच्चाहरुको स्वास्थ्य अवस्था हेरिरहेकी छन् ।
शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सक डा. सुवेदीका अनुसार जीवित जन्मिएका ४ शिशुलाई एन आइसियुमा अब्जभेसनका लागि राखिएको छ । उनीहरु सबैको स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ । ४ शिशुमध्ये एकको १ किलो ९ सय ग्राम तौल रहेको छ । अन्यको क्रमसः १ किलो ८ सय ग्राम, १ किलो ६ सय ग्राम र ८ सय ग्राम रहेको छ ।
प्रसुति गृहमा नियमित गर्भ जाँच गराइरहेकी तामाङको तीन हप्ता अघि भिडियो एक्सरे गर्दा एक बच्चाको गर्भमै मृत्यु भएको थाहा भएको थियो । सो बच्चा मृत्यु भएको थाहा पाएपछि चिकित्सकले अस्पतालमा नै राखेर उपचार गरिरहेको डा. सुवेदीले बताए । एकै महिलाले एकै पटकमा ५ बच्चा जन्माएको दुर्लभ केस मानिन्छ । ‘नेपालमा चार जनासम्म जन्माइएको धेरै रेकर्ड रहेछन्’ डा. सुवेदीले भने, ‘एकै पटक ५ बच्चा जन्माएको दुर्लभ नै हो ।’
Previous दशैं ‘जहाँ छौं, त्यही मनाउने’ गरी समन्वय गर्न आग्रह,जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना
Next पछिल्लो २४ घण्टामा थप २४४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि